Vaovao - Fizarana zana-tsipìka 7 mirefy Kodiaran'ny kaopy diamondra
7 mirefy zana-tsipìka fizarana kodiaran'ny kaopy diamondra
izany Kodiaran'ny kaopy fitotoana 7 santimetatramisy 6 zoro, zana-tsipìka miendrika fizarana natao ho an'ny fitotoana simenitra sy terrazzo gorodona, Azonao atao ihany koa ny mampiasa an'io kaopy fikosoham-bary kodia miraiki-po amin'ny fitotoana na prepping simenitra, na manala lakaoly, adhesives, thinset, grout fandriana, na hazavana coatings. Ho an'ny fikosoham-bary, ny kaopy fikosoham-bary dia afaka manoto betonika miboridana mba hanesorana ireo teboka avo. Azonao atao ny mampiasa ity fitaovana fitotoana simenitra ity ho an'ny fampiharana mando sy maina.
Ny endriky ny fizarana mahery vaika dia manampy anao hiditra ao ambanin'ny coatings maivana ary hanomana ny simenitrao amin'ny dingana tokana. Ity endrika ity ihany koa dia manakana ny fananganana akora misy tany eo anelanelan'ireo fizarana ka tsy maintsy manadio ny fitaovana fikosohanao ianao mandritra ny fampiasana.
Manana 10mm, 12mm, 15mm fizarana hegihts ho an'ny choise ianao, raha mila isa fizarana hafa izahay dia afaka ampanjifaina araka ny fangatahanao. Grits 6#~300# dia azo atao. Afaka mamolavola fatorana isan-karazany mba hifanaraka amin'ny gorodona mafy samihafa misy anao.7/8", 5/8"-7/8", M14, 5/8"-11 karazana fifandraisana arbor mamela ny hametraka eo amin'ny fikosoham-bary isan-karazany ary mandeha any aoriana mpitoto gorodona. Inona koa, afa-tsy 7 inch savaivony, izahay koa manome 4 ", 5" sns habe.
Kodiarana kaopy fikosoham-bary lehibe ho an'ny fikosoham-bary mahery vaika, ary manala ny lakaoly, ny adhesive, ny thinset, ny fandriam-pahalemana, na ny coating maivana
Ny fizarana miendrika zana-tsipìka miendrika zana-tsipìka dia natao hanampiana anao hiditra ao ambanin'ny coating maivana sy hanomanana simenitra amin'ny dingana iray.
Famafana puce haingana
Azo atao amin'ny asa mavesatra
Ny kofehy na tsy misy kofehy dia azo ampiasaina mora amin'ny fitaovana fikosoham-bary
Ho an'ny fampiharana mando sy maina
Natao ho an'ny fiainana maharitra kokoa ny fitaovana
Matokia ny kodiaran'ny kaopy fikosoham-bary Bontai Arrow Segment mba hanampy anao amin'ny asa.
Kodiaran'ny kaopy 6" hilti
Kodiaran'ny kaopy 7" roa sosona
Kodiaran'ny kaopy 7" TGP
7" kodia turbo
Kodiaran'ny kaopy 6" T-seg
Kodiaran'ny kaopy 5" S-seg
Kodiaran'ny kaopy 5" L-seg
Kodiaran'ny kaopy 4" andalana tokana
Kodiaran'ny kaopy 10".
Fotoana fandefasana: Nov-09-2021